2015 | ဂန္တ၀င် | Page 13
စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ဝေးလွင့်သွားစေမယ့် အားဆေးလေးများ အပိုင်း – ၂
၁။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားမှု။ မနေ့က ကျွန်တော်သိပ်ချစ်ရတဲ့ ခွေးလေး ကားတိုက်ခံရတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် သူ့ဘေးမှာထိုင်ပြီး သူ့ကို ပွေ့ဖက်ထားမိတယ်။ မျက်ရည်တွေလည်း ကျနေမိတယ်။ ဝမ်းအနည်းဆုံးကတော့ သူမသေခင် ဝေဒနာတွေ ခံစားနေရတဲ့ ကြားကနေ သူ့လျှာလေးနဲ့ ကျွန်တော့် မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးသွားတာပါပဲဗျာ။ ၂။ ငကန်းသေလျှင် ငဆွေပေါ်လိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ မနက် ၇...
တစ်ခုခုကို ငြင်းဆန်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒါလေးတွေ ပြန်မေးကြည်ပါ။
GandaWinAdmin - Jul 21, 2015
ဂန္ထဝင်ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ… ဘဝမှာ အချိန်မရှိလို့ဆိုပြီး အလုပ်တာဝန်တွေကို ငြင်းဆန်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို တာဝန်တစ်ခုကို ငြင်းဆန်လိုက်ပေမယ့် အခြားလည်းဘာမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်း ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် တစ်ခုခုငြင်းဆန်တော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီအလုပ်က ကိုယ့်အတွက် တစ်ကယ်အရေးပါလား မပါဘူးလားဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ -...
အရာရာ မတည်မြဲတဲ့ လောကကြီးမှာ သင့်အတွက် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုက…
အစိုးမရတဲ့ အနတ္တ ကမ္ဘာကြီးမှာ သင့်ကိုယ်သင် အလိုမကျတွေဖြစ်ပြီး အပြစ်တင်နေမိပြီလား။ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် မုန်းတီး နာကျည်းနေပြီလား။ ဒေါသမာန်မာနတရားတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နှက်နေပြီလား ဆိုတာ သင့်ကိုယ့်သင် မေးခွန်းထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္တဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ကယ်လို့ အဲဒီအရာတွေကို သင်ဆုပ်ကိုင်ထားမိပြီဆိုရင်တော့ သင့်စိတ်တွေ ပူလောင်တာက လွဲလို့...
GandaWinAdmin - Jul 20, 2015
အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ မိမိခင်ပွန်းနဲ့တော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်နိုင်ကြတာကြောင့် ပြဿနာ မရှိပေမယ့် သူ့ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာတော့ အခက်အခဲ လေးတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကွာဟမှုကြောင့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပြဿနာလေးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက္ခမတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါ အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။...
မျက်နှာပေါ်က မှဲ့တွေက ပြောနေတဲ့ သင့်အကြောင်း
ပထမဦးစွာ သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ မှဲ့ရှိမရှိ အရင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ မှဲ့တွေက သိသာထင်ရှားတယ် ဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်အများကြီး ရှိနေမှာပါ။ အကယ်၍ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမှာ အစက်အပြောက်တွေ၊ ဝက်ခြံတွေ၊ မှည့်ခြောက်တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေရင်တော့ ကောက်ချက်ချဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ သင့်မျက်နှာပေါ်က မှဲ့တွေက ဘယ်နံပါတ်လဲ ဆိုတာ...
စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ဝေးလွင့်သွားစေမယ့် အားဆေးလေးများ အပိုင်း – ၁
၁။ တော်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်အဖေ။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်အဖေ ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ "ကြိုးစားကြည့်စမ်းပါကွာ။" ထုတ်ကုန်ကောင်းကောင်း တစ်ခုရဖို့ အစကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုမှာ ကျွမ်းကျင်နေစရာ မလိုပါဘူးကွ။ Google တို့ Apple တို့ကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တစ်ယောက်မှ မပါဘူး။ ဒီလိုပဲ လေ့လာရင်း...
GandaWinAdmin - Jul 19, 2015
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိဘများဆီကနေ သားသမီးတွေအတွက် သင်ယူစရာ များစွာရှိပါတယ်။ သင်ယူစရာတွေထဲက အများစုကတော့ ကျွန်မတို့ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးတဲ့ အရာတွေပါ။ သားသမီးတွေဆိုတာ ကျွန်မတို့ကိုဥပမာထားပြီး ကြည့်တယ်၊ ကျွန်မတို့ပြောတာနားထောင်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ဆီကနေ သင်ယူကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ဟာ သားသမီးတွေ နမူနာယူဖို့အတွက် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားချိန်ဆဖို့...
လျှို့ဝှက်ချက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူစုံတွဲကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ လီးဗင်း တူဂဲသား (living together) တွေမှာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းမြေ့ရသော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာပါ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုတာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လုံးဝလိုက်နာဖို့ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့် လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကို...
၁။ မိဿ ရာသီဖွား (Aries) မတ်လ (၂၁) မှ ဧပရယ် (၁၉) ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများ အခုတစ်လော စိတ်တွေ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတတ်တာကြောင့် ကိုယ်မကြာခင် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရတော့မယ့် အစည်းအဝေးအတွက် စီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုလည်း တာဝန်ယူဖို့ ပျက်ကွက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုံလောက်တဲ့ အချိန်တစ်ခုယူပြီး ကိုယ့်စိတ်တွေကို တည်ငြိမ်အောင်...
GandaWinAdmin - Jul 18, 2015
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေဖန်တယ်၊ မကောင်းပြောတယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေဖန်တဲ့သူရော၊ ဝေဖန်ခံရတဲ့သူအတွက်ပါ နေရတာ မကောင်းပါဘူး။ အဲဒီလို မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးတွေကို အောက်မှာ အချက်လေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္တဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁။ လူတိုင်းမတူညီပါဘူး။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာတိုင်းကို လူတိုင်းကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးပါ။ ဒါ့ကြောင့်...
GandaWinAdmin - Jul 17, 2015
ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေမှာ သာမန်လူတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို အတိအကျသိပြီး အဲဒီအရာကို ရအောင်ယူဖို့လည်း သတ္တိရှိကြတယ်။ အရာအားလုံးကို စဉ်စားချင့်ချိန်ပြီးမှ လုပ်တာမို့ တစ်ခုခုမှား သွားခဲ့ရင်တောင် နောင်တမရကြပါဘူး။ အောက်ဖက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ လူတိုင်းက ချစ်ခင်လေးစား အားကျရတဲ့ သိပ်ကို...
GandaWinAdmin - Jul 16, 2015
သင့်ရည်းစားဟောင်း အကြောင်း အိပ်မက်မက်တယ် ဆိုပါစို့။ သင်မက်တာက အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ အဲဒီအခါ သင်ဟာ စိုးရိမ် တုန်လှုပ်မှုတွေနဲ့ နိုးထလာမယ်။ ရင်တွေတုန်နေပြီး ဒါဘာအဓိပ္ပါယ်ပါလိမ့် ဆိုပြီး စိတ်တွေ ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး သူ့ဆီ ဖုန်းခေါ်မယ်၊ အရမ်းလွမ်းတယ်၊ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်...
အမြဲ နှလုံးသွင်းနေသင့်တဲ့ စကားစုလေးများ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွေကလည်း ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့ စိတ်တွေကို ယိုင်နဲ့ မသွားရအောင် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ တကယ်အခက်အခဲ ကြုံလာတဲ့ အခါ ခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ ပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့...
ဘဝမှာ နောင်တကင်းကင်း ရပ်တည်နိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ
ဘဝမှာ တစ်ချို့လူတွေက ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး သေသည်အထိ ဘဝကို အကောင်းဆုံး ရပ်တည်နိုင်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကျ ပြန်တော့လည်း ဘဝကို စိတ်ပင်ပန်းကြီးစွာ ဖြတ်သန်းရပြီး နောင်တတွေ တသီကြီးနဲ့ လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားကြရတယ်။ အဲလို ဘဝမှာ နောင်တကင်းကင်းနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့သူတွေအား လုံးဆီက တူညီတဲ့...
GandaWinAdmin - Jul 14, 2015
၁။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေချိန်တွေမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံစိတ်လေးနဲ့ ဆက်ဆံပေးပါ။ လူတိုင်းဟာ သူ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့သူ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတာမို့ ကတောက်ကဆဖြစ်တိုင်းသာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဆုံးဖြတ်မယ်ဆို အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာ မလွဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒေါသထွက်တော့မယ်ဆိုရင် လူတိုင်း လူတိုင်း သူတို့အပြုံးတွေရဲ့...
မိန်းကလေးတို့ သိထားသင့်တဲ့ ယောကျာ်းမာယာ (၇) ဖြာ
ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေကိုပဲ မိန်းမတွေ မာယာများတတ်ကြတယ်ဆိုပြီး မိန်းမမာယာသဲ ကိုးဖြာ ဆိုပြီးတော့တောင် ထေ့ငေါ့တာတွေ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ ယောက်ျားတွေမှာလည်း ကျွန်မတို့ သတိမထားမိတဲ့ မာယာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အောက်ဖက်မှာ ဗဟုသုတ အဖြစ် လေ့လာကြည့်လို့ရအောင် ဂန္ထဝင် ညီမငယ်လေးတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ သူ့မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲ...
GandaWinAdmin - Jul 13, 2015
ကလေးတွေက သူတို့အပေါ် မိဘတွေ ဂရုတစိုက် ရှိကြတာကို တောင့်တတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာခြင်းက အဲ့ဒီအတွက် အနှောင့်အယှက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ iPhones ၊ Samsungs စတဲ့ Smart Phone တွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေ၊ Internet အသုံးပြုမှု မြင့်မားလာတာတွေ၊ လူမှုကွန်ယက်တွေဖြစ်တဲ့...
Talents and Models မှ မတင်မိုးလွင်နဲ့ (၅) မိနစ်အမေးအဖြေ
Model : Ma Tin Moe Lwin Photo Credit: "Hope for Children. Hope for Peace" Campaign မင်္ဂလာပါ အစ်မ။ ညီမတို့ မဂ္ဂဇင်းက အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အားကျအတုယူဖွယ် အတွေ့အကြုံလေးတွေကို မေးမြန်းပြီး ဂန္ထဝင် စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်...
အမှန်တရားဆိုတာ ခါးသီးလှပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင် အခုဖော်ပြသွားမယ့် အချက်လေးတွေကို ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်လည်း ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးမို့ ဂန္ထဝင်မှ ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ဟာ မထင်မတ်ဘဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးဆွဲရာ ကနေရတဲ့ ရုပ်သေးရုပ် တစ်ရုပ်လို ဖြစ်နေတတ်မှာပါ။ သင်ကတော့ တစ်နေ့နေ့မှာ...
ဇူလိုင်လမှာမွေးဖွားသူတို့၏ ထူးခြားသော ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးများ
၁။ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြတယ်။ ၂။ သိုသိုသိပ်သိပ် နေတတ်ကြတယ်။ ၃။ နားလည်ရခက်တဲ့ သူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ ၄။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဆိုတာ မရှိသလောက်ကို သွေးအေးတတ်ကြတယ်။ ၅။ မိမိကိုယ်မိမိ ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်။ ၇။ စိတ်ပြေလွယ်ကြတယ်။ ၈။ ရိုးသားကြတယ်။ ၉။ သူများတွေရဲ့ခံစားချက်ကို အလေးထားတတ်ကြတယ်။ ၁၀။ လိမ္မာ ပါးနပ်ကြတယ်။ ၁၁။ ဖော်ရွေတတ်ကြတယ်။ ၁၂။ ဒေါသကြီးပြီး စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို ခန့်မှန်းရခက်ကြတယ်။ ၁၃။ စိတ်အပြောင်းအလဲ...